धार्मिक संसारका पाष्टरहरू र एल्डरहरू सबैले बाइबल राम्ररी जान्दछन् र प्रायजसो अरूलाई त्यसको व्याख्या गर्छन्, मानिसहरूलाई बाइबलको पालना गर्न लाउँछन्। यसो गर्दा, के तिनीहरूले प्रभुलाई उचाल्दैनन् र प्रभुको गवाही दिँदैनन् र? तिनीहरूले मानिसहरूलाई धोखा दिइरहेका छन्, तिनीहरू पाखण्डी फरिसीहरू हुन् भनेर तपाईं कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
धार्मिक संसारका पाष्टरहरू र एल्डरहरू सबैले बाइबल राम्ररी जान्दछन् र प्रायजसो अरूलाई त्यसको व्याख्या गर्छन्, मानिसहरूलाई बाइबलको पालना गर्न लाउँछन्। यसो गर्दा, के तिनीहरूले प्रभुलाई उचाल्दैनन् र प्रभुको गवाही दिँदैनन् र? तिनीहरूले मानिसहरूलाई धोखा दिइरहेका छन्, तिनीहरू पाखण्डी फरिसीहरू हुन् भनेर तपाईं कसरी भन्न सक्नुहुन्छ?
अघिल्लो: धार्मिक संसारका पाष्टरहरू र एल्डरहरू सबैले मण्डलीहरूमा परमेश्‍वरको सेवा गर्छन्। तिनीहरू प्रभुको पुनरागमनको प्रतीक्षा गर्ने कार्यमा जागा र सावधान हुनु पर्ने हो। यसैले किन तिनीहरू सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरका आखिरी दिनहरूको कामको खोजी वा अनुसन्धान गर्ने कुनै कोसिस गर्दैनन्, बरु अफवाह फैलाउँछन्, दोष लाउँछन् र सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको निन्दा गर्छन्, र विश्‍वासीहरूलाई धोका दिने र तिनीहरूलाई साँचो बाटोको अनुसन्धान गर्नुबाट रोक्ने कोसिस गर्छन्?
अर्को: प्रभु येशूको आगमन हुनुभन्दा पहिले, फरिसीहरूले प्रायजसो सभाघरहरूमा धर्मशास्त्रको व्याख्या गर्थे र मानिसहरूको सामु प्रार्थना गर्थे। तिनीहरू धेरै धर्मी देखिन्थे, र मानिसहरूको नजरमा, तिनीहरूले धर्मशास्त्रको उल्लङ्घन हुने कुनै पनि कार्य गर्दैनन् जस्तो लाग्थ्यो। त्यसो भए फरिसीहरूलाई प्रभु येशूले किन श्राप दिनुभयो? तिनीहरूले कुन प्रकारले परमेश्‍वरको अपमान गरे, तिनीहरूले किन परमेश्‍वरको क्रोध भड्काए?